POLISY MANAMBONINAHITRA EFATRA NO NAVOAKA TAMIN’NY FOMBA OFISIALY
Navoaka tamin’ny fomba ofisialy ny Zoma 29 Jolay teo ireo manamboninahitra Polisy efatra mirahalahy izay vao nahavita ny fiofanany mikasika ny “Analyse Criminelle de Premier Niveau” na (ARC 1), teny amin’ny Toby Ratsimandrava. Roa herinandro ny faharetan’ny fiofanan’izy ireo izay niompanana tanteraka tamin’ny fandalinana sy fikarohana ny heloka bevava.
Samy notolorana ny mari-pahaizana “certificat d’Analyse Criminelle de Premier Niveau” (ARC 1), amin’ny maha-pikaroka azy ireo izy efatra mirahalahy vao nahavita ny fiofanany iretoIzao fiofanana izao dia tafiditra indrindra eo amin’ny fiaraha-miasa misy eo amin’ny Zandarimariam-Pirenena sy ny Polisim-Pirenena ary notohanan’ny fiaraha-miasa matotra eo amin’ny Zandarimaria Frantsay sy Malagasy. Tompomarika taminn’izao fiofanana izao ny “Direction de la Police Judiciaire” na (DPJ), eo anivon’ny Komandin’ny Zandarimariam-Pirenena.
Tonga nanotrona sy nanome voninahitra ny lanonana ary nisolo tena ny Jeneraly Komandin’ny Zandarimariam-pirenena, ny Kolonely RANDRIAMANARINA Christophe, sy ny tomponandraikitra avy ao amin’ny Polisim-pirenena notarihin’ny Controleur général RAKOTONDRAVAO Albert, nisolo tena ny Talen’ny Sekolin’ny Polisim-pirenena sy ny Tale jeneralin’ny Polisim-pirenena.
Ireo manam-boninahitra nahavita fiofanana. (Sary : ZP)